Hoggaamiyaha Jarmalka Oo Si Weyn U Difaacday Soo Galeetiga Dalkeeda Ku Qulqulaya | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Hoggaamiyaha Jarmalka Oo Si Weyn U Difaacday Soo Galeetiga Dalkeeda Ku Qulqulaya
Hargeysa:(Hubaal)-Angela Merkel oo ah haweeneyda hoggaamisa dawlada Jarmalka ayaa sheegtay in qaxootiga soo galay Jarmalka aanay halkaa geynin fikirka galbeedka aadka looga neceb yahay ee argagaxisonimada.
Waxa ay intaa raacisay in diinta Islaamka laga ogol yahay dalkeeda maadaama loo isticmaalo siyaaba qaddariyay dastuurka, iyadoo dhawaanna weeraro ISIS qaaday ay ka dheceen Jarmalka. “’Dhacdada argagaxisonimada Islaamiyiintu ma aha dhacdo qaxootigu noo keeneen”. Sidaa ayey tidhi Angela Merkel.
In ka badan hal malyan oo qaxooti ah ayaa galay Jarmlka sanadkii lasoo dhaafay ee 2015 oo qudha, waxanaDadkaas qaarlkood ka qaxeen wadamada colaadaha ba’an ay ka jiraan ee Bariga Dhexe sida Suuriya iyo Ciraaq halka in badan oo kalena ay ka haajireen qaarada Afrika iyagoo ka baxsanaya gaajo iyo faqri.
Si kastaba ha ahaatee, muwaadiniin badan oo reer Jarmal ah ayaa shacuur cadho leh oo ay u qabaan qaxootiga iyo ajaaniibta dalkooda jooga ay ku dhalatay gaar ahaan bishii lasoo dhaafay kadib markii weeraro badan ay ka dheceen dalkaa kuwaasoo 3 ka mid ahaa dad muhaajiriin ahi qaadeen.